Momba anay - Xuzhou Honghui Glass Products Co., Ltd.
Xuzhou Honghui Glass Products Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny kianjan'i Junsheng, Xuzhou City. Orinasa indostrialy sy varotra izy io izay mampiditra fampandrosoana sy famokarana, famolavolana, famokarana, varotra ary varotra. Zonay ny manondrana entana. Ny orinasa misy anay dia manan-jo hanondrana entana. Ny orinasa misy anay efa ho 30 taona ny fampandrosoana sy ny famokarana traikefa. Ny orinasanay dia mandray ny teknolojia famokarana mandroso sy ny teknolojia fanodinana lalina, manana fitaovana sy fitaovana fanandramana mandroso izahay, mba hanananay fahaiza-manao fampandrosoana matanjaka. Ny kalitaon'ny vokatra fitaratra dia voafehy mafy, ary nahazo ny fankasitrahan'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany. Ny vokatray dia aondrana any Etazonia, Russia, Canada, Australia, Vietnam ary firenena 100 sy faritra hafa.
Niorina tamin'ny Febroary 2015 ny orinasa, manana sampana 5 izahay, ao anatin'izany ny sampana varotra ivelany, sampana varotra anatiny, sampana famokarana, sns. Manana tranokala Alibaba sy tranokala 1688 izy io. Manana orinasam-pampianarana matihanina maherin'ny 50 sy mpitantana varotra izahay. Ankoatr'izay, manana ekipa mpamorona matihanina izahay, noho izany dia afaka mamorona karazana tavoahangy vaovao mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa izahay ary manamboatra lasitra vaovao ho an'ny mpanjifa ao anatin'ny fotoana fohy.
Izahay koa dia manolotra karazan-tavoahangy fitaratra natokana ho an'ny fanodinana lalina, toy ny fanala, ny fanorana elektrôlika, ny famafazana, ny applique ary ny fanontana amin'ny efijery. tavoahangy kolotsaina, tavoahangy zava-pisotro isan-karazany, labozia labozia, tanky fitehirizana, tavoahangy fanatsarana tarehy ary zavatra hafa mifandraika amin'ny fanandramana simika, bika fitaratra sns .Manana rafitra serivisy feno izahay, afaka manome entana izahay, toy ny fitaterana fiara, lamasinina, fitaterana an-dranomasina sy fitaterana an'habakabaka. Xuzhou Honghui Glass Products Co., Ltd. dia mandray ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao, manantena ny ho tonga mpiara-miombon'antoka azo antoka ianao!